Saraakiil Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqotay Qarax Ka Dhacay Boosaaso – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Saraakiil Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqotay Qarax Ka Dhacay Boosaaso
On Jan 26, 2022 265 0
Tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar qarax loo adeegsay oo galabta ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari.
Qaraxa oo ahaa mid culus ayaa waxa uu si gaar ah ka dhacay goob isku imaatin ah oo ku taalla bartamaha magaalada Boosaaso, halkaasi oo ay ku sugnaayeen Saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka Puntland, kuwaas oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxa.
War rasmi ah oo ka soo baxay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay lagu xaqiijiyay in qaraxa lagu dilay Maxamed Baxwal oo ahaa gudoomiyaha deegaanka Wardheer oo hoostaga magaalada Booosaaso, halka lagu dhaawacay Taliye ku-xigeenkii hore ee ciidanka booliiska gobolka Bari, Axmed Jaraale, kaasi oo la xaqiijiyay in dhaawiciisa uu garaab yahay.
Sidoo kale qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa ku dhaawacmay labo askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Puntland ee uu hogaamiyo Saciid Dani.
Qarxaan khasaaraha dhaliyay ayaa ku soo beegmaya saacado un kadib markii ciidamo gaar ah oo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay howlgal qorshaysan oo ay fuliyeen bartamaha Boosaaso ay ku qaarijiyeen Taliyihii hore ee kantoroolka magaaladaas kabtan Barkhad Maxamed Jaamac.